SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Alur Amharic Amis Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Belize Kriol Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Cibemba Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Douala Dutch Edo Efik Esan Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guadeloupean Creole Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kannada Kekchi Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Latvian Lingala Lithuanian Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Marshallese Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
JESU akamboti: “Kupa kune mufaro mukuru kupfuura kugamuchira.” (Mab. 20:35) Chokwadi ichocho chinoshandawo paushamwari hwedu naJehovha. Nei zvakadaro? Jehovha akatipa zvipo zvakawanda zvinoita kuti tifare, asi tinogona kuwana mufaro wakatokura patinopa chipo kuna Jehovha. Chipo chipi chatingapa Jehovha? Zvirevo 3:9 inoti: “Kudza Jehovha nezvinhu zvako zvinokosha.” Zvinhu zvedu “zvinokosha” zvinosanganisira nguva yedu, zvatinogona, simba redu, uye pfuma yedu. Patinoshandisa zvinhu izvozvo kuti kunamata kwechokwadi kufambire mberi, tinenge tichipa Jehovha chipo, uye izvi zvinoita kuti tiwane mufaro mukuru.
Chii chichatibatsira kuti tisarega kupa Jehovha zvinhu zvatiinazvo? Muapostora Pauro akaudza vaKorinde kuti ‘vatsaure chimwe chinhu’ chekupa sechipo. (1 VaK. 16:2) Ungaita sei kana uchida kuziva nezvenzira dzekupa nadzo dzinoshanda kwaunogara? Ona bhokisi riri pasi apa.
Mune dzimwe nyika haukwanisi kupa chipo chemari paIndaneti. Zvisinei, mashoko nezvedzimwe nzira dzekupa nadzo zvipo anowanika papeji yapaIndaneti inotaura nezvekupa zvipo. Mune dzimwe nyika papeji iyoyo pane pakanzi Mibvunzo Inonyanya Kubvunzwa uye panopindurwa mibvunzo inowanzobvunzwa nevanhu nezvenyaya yekupa zvipo.
Nzira iri nyore yekupa nayo zvipo paIndaneti
IRI NYORE KUWANA
Nyora paIndaneti kuti donate.jw.org
Baya pakanzi “Donations” papeji yekutanga yeJW Library®
IRI NYORE KUSHANDISA
Ipa chipo chako kana kuti ita kuti chigare chichipiwa:
Basa Remunyika Yese